နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကိုညို့ယူဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ Sexy ဆန်ဆန်ပုံရိပ်များ - Cele Platform
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ပျိုပျိုမေလေးတွေကြားမှာ အထူးရေပန်းစား အောင်မြင်နေတဲ့ ကိုလူချောလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်လေးနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ ပိုင်တံခွန်က နိုင်ငံခြားမင်းသားလေးလို့တောင် ထင်မှတ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ကျကျ ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး အရပ်ရှည်ရှည်၊ Body ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့မို့ သူ့ကိုအားပေးချစ်ခင်သူတွေကလည်း အင်မတန် များပြားလွန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမင်းသားတစ်ဦးလို့တောင် ထင်မှတ်ရလောက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်က ကြော်ငြာ၊ သီချင်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးနေရတဲ့အပြင် ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်း တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ ကောင်မလေးတွေကြွေသွားရလောက်တဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးထဲမှာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ ညို့အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတင်မကပဲ ထိုင်းနိုင်ငံက နူတ်ခမ်းနီမလေးတွေထိတောင် အောင်မြင်မှုရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတလောမှာတော့ ပိုင်တံခွန်က ကြော်ငြာနဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုလေးတွေ ရိုက်ကူးနေရပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များအောင်မြင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးတွက် ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ပုံလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source:Paing Takhon. ; crd -myanmarload
ခဈြပရိသတျကွီးရေ မငျးသားခြောလေး ပိုငျတံခှနျကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျ ပြိုပြိုမလေေးတှကွေားမှာ အထူးရပေနျးစား အောငျမွငျနတေဲ့ ကိုလူခြောလေး ဖွဈပါတယျ။ ဆံပငျအရှညျလေးနဲ့ အရမျးကိုလိုကျဖကျလှနျးတဲ့ ပိုငျတံခှနျက နိုငျငံခွားမငျးသားလေးလို့တောငျ ထငျမှတျနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ စမတျကကြ ဝတျဆငျတတျပွီး အရပျရှညျရှညျ၊ Body ဖွောငျ့ဖွောငျ့နဲ့မို့ သူ့ကိုအားပေးခဈြခငျသူတှကေလညျး အငျမတနျ မြားပွားလှနျးတာ ဖွဈပါတယျ။
ဆံနှယျရှညျလေးတှနေဲ့ နိုငျငံခွားမငျးသားတဈဦးလို့တောငျ ထငျမှတျရလောကျတဲ့ ပိုငျတံခှနျက ကွျောငွာ၊ သီခငျြးဗီဒီယိုတှနေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးနရေတဲ့အပွငျ ပှဲအခမျးအနားတှကေိုလညျး တကျရောကျနတော ဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာတော့ ကောငျမလေးတှကွှေသှေားရလောကျတဲ့ အမိုကျစားပုံလေးတှကေိုဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ။ပုံလေးထဲမှာ အရမျးခဈြဖို့ကောငျးနတောလညျးတှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျတံခှနျကတော့ ညို့အားပွငျးပွငျးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံတငျမကပဲ ထိုငျးနိုငျငံက နူတျခမျးနီမလေးတှထေိတောငျ အောငျမွငျမှုရရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။အခုတလောမှာတော့ ပိုငျတံခှနျက ကွျောငွာနဲ့ သီခငျြးဗီဒီယိုလေးတှေ ရိုကျကူးနရေပွီး ပရိသတျတှကွေားမှာ အရမျးကို လူကွိုကျမြားအောငျမွငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိတျသတျကွီးတှကျ ပိုငျတံခှနျရဲ့ ပုံလေးကိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ Source:Paing Takhon. ; crd -myanmarload